Malunga nathi-Qingdao Jianma Gene Technology Co., Ltd.
I-Qingdao Jianma Gene Technology Co., Ltd. yasekwa ngoFebruwari 2019, Ifumaneka kwiZiko loPhando ngeTekhnoloji ye-Qingdao ye-High-tech Zone, kwiPhondo laseShandong, lishishini lenzululwazi kunye netekhnoloji egxile kwi-R & D kunye nemveliso yezixhobo zonyango kwi Intsimi ye-POCT.
Inkampani ixhotywe ngendawo yokusebenzela yokuhlanjululwa kwinqanaba le-100,000 kunye nezixhobo eziphambili zophando lwezenzululwazi kunye nezixhobo zemveliso, kwaye ine-1,200 yemitha yesikwere yophando kunye nophuhliso kunye nemveliso yokusebenzela.
Inkampani inamaqonga amabini obuchwephesha beetekhnoloji ye-asidi yokujonga ubuchwephesha (iqonga lokufumanisa i-asidi ye-asidi ye-asidi, i-ASEA ye-asidi yeqonga lokujonga ngokukhawuleza), Iimveliso eziphuhliswe ngokusekwe kweli qonga zinempawu zokulula, isantya, ukucaciswa okuphezulu, kunye novakalelo oluphezulu. Isetyenziswe ngempumelelo kumacandelo amaninzi anjengempilo yezonyango, ukhuseleko lokutya, izifo zezilwanyana njalo njalo.
Ukuthembela kweli qonga lobuchwephesha lingentla, siphuhlisa izixhobo zokubamba i-asidi ye-nucleic engaxhomekeki kwizixhobo ezintsonkothileyo, ekulindeleke ukuba zisetyenziswe kusapho kunye neengcambu zonyango ekufumaneni unyango kwixesha elizayo.
Iimfuno ezintsha zokuthintela nokulawula ubhubhane weSARS-CoV-2 kunye nobume beshishini
Njengoko ubhubhane wehlabathi uqhubeka ngokuvela, ukuthintela kunye nokulawula ubhubhane kungene kwinqanaba lokuqheleka.
Ukuze uphendule ngokufanelekileyo kwimeko yangoku kwaye uhlangabezane neemfuno zokuvavanywa kwe-acid ye-acid kwiimeko ezahlukeneyo, Kuyimfuneko ukukhawulezisa uphando kunye nophuhliso kunye nombutho wemveliso, ukumilisela iimveliso ezihlangeneyo kunye nezikhawulezayo zovavanyo ezifanelekileyo kuvavanyo lwesiza, kwaye ukuphucula iimveliso zovavanyo lwe-asidi yelizwe lam kunye neenkqubo zobuchwephesha.
Nge-29 kaJulayi, iNkulumbuso u-Li Keqiang ubambe intlanganiso yesigqeba seBhunga likaRhulumente, ukuqinisekisa ukuba isicwangciso sisonke sokuthintela ubhubhane kunye nophuhliso, sele kwenziwe amalungiselelo okomeleza ulwakhiwo lwezakhono zovavanyo lwe-acid ye-nucleic.
Intlanganiso ichaze ukuba kubalulekile ukuhlanganisa onke amaqela ukukhawulezisa uphuhliso kunye nokwazisa iimveliso ngexeshana elifutshane, ubuntununtunu obuphezulu kunye nokusebenza ngokulula. abaguli kwiiklinikhi zomkhuhlane, zama ukunciphisa ingxelo kwiiyure ezi-4.
Ngexesha lokuqhambuka kwe I-SARS-CoV-2 ubhubhane, iqela leJianma Gene Technology Co, Ltd. lisebenze neYunivesithi yaseQingdao yezeNzululwazi neTekhnoloji kunye neYunivesithi yaseQingdao ukuphanda iingxaki eziphambili, ukuphuhlisa iimveliso zokufumanisa i-acid, kunye nokufezekisa malunga nemizuzu engama-30.
Ngo-Matshi 13, 2020, ikhithi ye-COVID-19 yafumana isatifikethi se-EU CE; Ngo-Meyi, wafumana isiqinisekiso sokuthumela kwelinye ilizwe somvelisi omtsha wezinto zokuvavanya isithsaba soMphathiswa Wezorhwebo wase China.
Ityhubhu yokusebenzisa intsholongwane enye yokusetyenziswa kwesampulu eyenziwe yinkampani yethu ithatha kuphela imizuzu emi-3 yokugqibezela ukuqhubekeka kwesampulu kunye nokukhupha ngokukhawuleza.Ngoku, ukufayilwa kunye nokufayilwa kwemveliso yezixhobo zonyango zeClass I kugqityiwe.Iimveliso ezikhawulezayo zokufumanisa i-asidi ye-asidi ephuhliswe yinkampani yenza mfutshane ixesha lokufumanisa i-acid kwimizuzu engama-30, ehlangabezana ngokupheleleyo neemfuno zokuthintela ubhubhane kunye neemfuno zolawulo.Okwangoku, iimveliso zovavanyo ezikhawulezayo ze-COVID-19 zithunyelwe e-Indonesia, eBrazil nakwamanye amazwe, kwaye zamkelwe ngabathengi.
© Copyright - 2010-2020: Onke amalungelo agciniwe. Uvavanyo lweTshayina, IStaphylococcus Aureus Nucleic Acid, I-Canine Parvovirus (Cp), Ikhithi yasimahla yokuSusa,